>၇။ ကြေကွဲခြင်း အပိုင်းအစ အနည်းငယ် – The Only Way To Go!
Posted on December 29, 2009 by barnay
>လူသားနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကြေကွဲခြင်းသည် နှလုံးသာကို ဗဟိုပြုပြီး ဖြစ်ပွားသော စိတ်ဒဏ်တစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို ဆိုချင်တယ်ဗျာ နှလုံးသားကြေကွဲရာမှာ အမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါတယ် တစ်ချို့က ချစ်သူနှင့်ပတ်သက်၍ . တစ်ချို့က မိသားစုနှင့်ပတ်သက်၍ . တစ်ချို့က ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်၍. အဖုံဖုံပေါ့ ……….
One thought on “>၇။ ကြေကွဲခြင်း အပိုင်းအစ အနည်းငယ်”
ကြေ ကွဲ နေချိန်မှာ စိတ်သက်သာ၇ာ ကို အတိုင်း အတာ တခု ထိရစေခဲ့ လို့ 